U-Huawei akazange abhengeze amanqaku e-DXOMark kwi-Mate 20 kuba babephezulu kakhulu | Zonke iinkonzo ze-intanethi
IHuawei namhlanje yazise uthotho Umlingani 20 kwintengiso yaseTshayina kumsitho eShanghai. Khumbula ukuba uthotho lwamaqabane angama-20 lwasungulwa okokuqala eLondon kwiiveki ezimbalwa ezidlulileyo, kodwa ngoku yenza amatyala ayo kwilizwe lokuzalwa lophawu.
Kangangexesha elithile ngoku, kuye kwaba yinto yesiko ukuba uphononongo lwe-DXOMark lwekhamera yemodeli yeflegi ikhutshwe ngaxeshanye nefowuni ibhengeziwe. Ngaphandle koku, uthotho lwe-Mate 20 luye lwaphambuka kulolo qheliselo, kude kube ngoku. U-Huawei utyhile into enenjongo kwaye kutheni. Siyakwandisa!
Ngexesha lokwaziswa e-China, U-Huawei utyhile ukuba ayinazicwangciso zokukhupha amanqaku e-DXOMark yayo nayiphi na imodeli. Kungenxa yokuba amanqaku ebhentshi yekhamera ye-DXOMark aphezulu kakhulu. Ngokucacileyo i-Mate 20, iMate 20 Pro, Umlingane 20X y Umlingane 20 Porsche baneseto esinamandla sekhamera, ekunokwenzeka ukuba sesona sinamandla ngalo mzuzu.
Ngokucacileyo, I-Mate 20 Pro kufuneka ibe yeyona inamandla, kunye neekhamera zayo ezingasemva eziphindwe kathathu ezibandakanya i-40 megapixel + 20 megapixel + 8 megapixel setup camera. Ngekhe sazi ukuba baqhube njani kuphononongo oluzimeleyo lwe-DXOMark. U-Huawei uthi akafuni ukutsala umdla woluntu ngokungeyomfunekoKodwa kunokwenzeka ukuba ngenye imini inkampani iyakupapasha amanqaku njengesixhobo sokuthengisa.
Ke, njengoko kunjalo, el IHuawei P20 Pro isemi njenge-smartphone kunye nenqanaba eliphezulu le-DXOMark, inamanqaku ali-109. Oku kulandelwa yi-Apple XS Max yamva nje, ngamanqaku ali-105, kunye ne Xiaomi Mi Mix 3, Eyenze amatyala ayo izolo kwaye ihleli kwindawo yesithathu ngamanqaku e-103.
Kodwa ngaba inkqubo yokufota yezi fowuni ingcono kunaleyo I-Google Pixel 3? Yonke into yalatha ku-ewe. Nangona eli candelo kakhulu, lisebenza kakhulu nguG omkhulu, ukumiselwa kwekhamera kathathu kukaHuawei nako. Ngequbuliso, hayi kangako kwicala lesoftware, njengoko uGoogle wenzayo, kodwa kulwazi lwayo. Nangona kunjalo, le yinto ekufuneka siyenzile kamva. Ngeli xesha, uyakubona oko kutyhilwe yinkampani yaseMelika ukuza kuthi ga ngoku ukukuchukumisa ngeefoto ezibonelelwa zezi modeli: Umlingo wokuthatha iifoto zasebusuku ngaphandle kweflash ngemowudi ye 'Night Sight' yeGoogle Pixel 3 y Ukuqwalaselwa kumgangatho obalaseleyo weeselfies zeqela ezithathwe ngeGoogle Pixel 3.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izaziso » U-Huawei akazange abhengeze amanqaku e-Mate 20's DXOMark kuba ayephezulu kakhulu
Ungaphuma njani kwiGoogle Chrome ye-Android